EFA TEO AMBAVAHAONAN'NY FAHAFATESANA
Misy lehilahy iray izay, tamin'iny faritra Atsimon'ny Nosy no niseho ny tantara. Eto aloha dia tiako ny misarika ny saintsika rehetra fa mahery ny vavaka araka ny tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny
Jakoba 5:17 "Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana."
Daniela 6:11 "Nony fantatr'i Daniela fa efa voaisy sonia ny didy, dia nankao an-tranony izy; ary ny varavarankelin'ny tranony ambony nanandrify an'i Jerosalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamaniny izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Ary rehefa nahazo teny toy izany- ralehilahy dia nataony tao amin'ny trano-maizina anatiny indrindra izy, ary ny tongony nobolokiny mafy tamin'ny boloky hazo."
Asa 16: 25-31 "Ary nony namatonalina, dia nivavaka sy nihira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy; ary nihaino azy ny mpifatotra.Ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka, ka nihozongozona ny fanorenan'ny trano-maizina; dia nivoha niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary nivaha avokoa ny fatoran'izy rehetra.Dia nahatsiaro ny mpiandry trano-maizina ka nahita ny varavaran'ny trano-maizina nivoha, dia nanatsoka ny sabany izy ka saiky hamono tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra.Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: Aza mamono tena, fa ato ihany izahay rehetra.Ary izy niantso jiro, dia nikaretsaka niditra sady tora-kovitra ka niankohoka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy.Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy, dia hoy izy: Tompoko, inona no mety hataoko, mba hovonjena aho? Dia hoy izy roa lahy: Minoa an'i Jesosy Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao."
Nentin'olona tamina toerana tsy fantatra izy, rehefa tonga tao amin'ilay toerana dia nisy olona ihany koa niaraka taminy tao. rehefa afaka andro vitsivitsy anefa dia nasainy nifampiresaka tamin'ny fianakaviany ihany izy, ramin'ny alalan'ny antso an-taroby na ny téléphone izany. Teo no nilazany fa tsy misy hevitra intsony ny hahitana azy fa tena very tanteraka. Ary dia nilaza izy fa mivavaha hoazy fa tsy misy hevitra intsony. Rehefa naheno izany ny rehetra dia natao ny fifadiana hanina sy ny alim-bavaka, ka rehefa naharitra nivavaka na ny fianakaviana na ilay niharam-boina, dia naheno ny hiran'iroe mpanao alim-bavaka ny mpiambina ka nanotany hoe: "Ary toa mihira hianaroe?"; dia hoy izy hoe: "Tsia tompoko, aiza izay vavanay misokatra eo?" Teo dia nisy ny fahatsapana fa nihaona ny vavaka izay natao. Ary teo ihany koa no niseho ny fahgagana. Ary nony afaka andro vitsivitsy taty aoriana dia navotsitr'ireo jiolahy izy, ka tanteraka taminy ilay teny ao amin'ny Jeremia 33: 3. Izay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny, satria efa teo ambavahaonan'ny fahafatesana no nesoriny.
Ka ny ampaherezana antsika rehetra dia ny hoe: ny vavaka manova zavatra, ary Andriamanitra mahery ny Andriamanintsika ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Koa aza atao ambanin-javatra ry havana ny vavaka, fa io no lalana hifampiresahana amin'Andriamanitra, ary mihaino antsika ny Tompo, na aiza na aiza toerana misy anao, na inona na inona zavatra manjo anao. Manatona ny Tompo, miresaha aminy, mitalahoa mandrakariva, fa mamaly anao Izy. Tsy tian'Andriamanitra anie isika zanany ny hitoloko mandrakariva e! Fa ny hananao fiadanana no tiany.
Koa andeha ary isika hanao izao vavaka izao:
Ray ô! misaotra anao aho, raha mbola nomenao tombonandro ary mbola nahita izao fijoroana vavolombelona izao, ary tsy kisendrasendra izao Tompo, fa entinao hanefena ahy amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Andriamanitra mihaino vavaka tokoa ianao, ary momba sy mitahy anay mpanomponao, ary ianao no efa nilaza hoe "ny mpanompoko efa nofidiko ka tsy mba hariako." Sambatra toakoa izahay Tompo manana anao Tompo sy mpamonjy ny fiainanay, mpanjakan'ny mpanjaka ianao, Tompon'ny Tompo, Andriamanitra mahery, mpanao fahagagana izay tsy takatry ny sainay olombelona dia ianao no manohy azy.